Nanafika sambo niaraka tamin'ny ekipa rosiana ny jiolahin-tsambo afrikana, naka an-keriny tantsambo enina
Home » Fiarovan-tena amin'ny loza sy loza » Nanafika sambo niaraka tamin'ny ekipa rosiana ny jiolahin-tsambo afrikana, naka an-keriny tantsambo enina
Nanafika ny sambo MSC Mandy misy sambo flagged ny piraty, niaraka tamin'ny ekipa rosiana iray tsy lavitra ny morontsirak'i Benin, any Afrika Andrefana.
Raha ny filazan'ny masoivohon'ny fitaterana an-dranomasina sy renirano any Russia sy ny masoivoho rosiana ao Benin dia tantsambo enina no nalaina ankeriny.
Andiany iray mpanafika fito ka hatramin'ny sivy, nirongo basy sy lelany niondrana an-tsambo tao amin'ny MSC Mandy, no nandroba ny sambo nandritra ny adiny roa talohan'ny nialany ary nitondra ny enina tamin'ireo tantsambo niaraka tamin'izy ireo.
Rosiana 23 no iray ary Okrainiana iray amin'ireo mpiasan'ny ekipa, raha ny filazan'ny fahefana maritimy rosianina. Ny masoivoho, nitanisa ny tafika an-dranomasina Benin, dia nilaza fa misy olona 26: Rosiana 20, Okrainiana efatra ary Zeorziana roa.
Nalaina ankeriny ny kapiteny, ny lehibeny ary ny vadiny fahatelo, boaty iray, mpihaza mahay ary mpahandro, olom-pirenena rosiana rehetra. Ireo mpiasan'ny ekipa hafa kosa dia mbola tsy nisy naninona.
Voalaza fa nitranga tamin'ny misasakalina teo tokony ho 55 kilaometatra avy teo amin'ny moron-dranomasina niala an'i Cotonou, tanàna lehibe misy seranana any amin'ny morontsiraka atsimon'i Benin.
Taorian'ny fanafihana, ny MSC Mandy dia nankeny amin'ny seranan'i Lagos ary antenaina fa hiondrana an-tsambo lavitra kokoa any Cotonou, eo ambany lohan'ny vady mpisolo toerana. Ny ekipa mpisolo toerana dia antenaina hanatevin-daharana ny sisa amin'ireo tantsambo ao Cotonou.
Any amin'ny Helodrano Gineana no misy ny sambo, hoy ny Marinetraffic.
Ny faritry ny morontsirak'i Benin sy ny manodidina an'i Nizeria dia heverina ho rano atahorana be. Nisy fanafihana piraty dimy voalaza fa teny akaikin'i Cotonou ary 20 mahery tany akaikin'i Lagos any Nizeria tamin'ny taon-dasa.
Miasa hanafaka ireo tantsambo voasambotra ireo diplaomaty rosiana any Nizeria sy Benin, hoy ny tatitry ny RIA Novosti. Tsy mbola nisy fitakiana hatreto.
Olona dimy naratra tao amin'ny bus bus nijanona nanapoaka baomba mpampihorohoro
Mpitondra sainam-pirenena poloney nantsoina hoe “Airline tsara indrindra any Eropa atsinanana”